यी खानेकुराहरुमा हुन्छ क्यान्सर हुने ज्यादा संभावना - Nayapul Online
यी खानेकुराहरुमा हुन्छ क्यान्सर हुने ज्यादा संभावना
काठमाडौं क्यान्सर प्रणघातक रोग मानिन्छ । यो रोग विभिन्न कारणले लाग्छ । जसमध्ये केही मात्रामा मानिसहरुको खानेकुरा पनि एक कारण हो । त्यसैले क्यान्सरबाट बच्न खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ क्यान्सरको जोखिम भएका केही खानेकुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
विकल्प : सकेसम्म रातो मासु नखाने । रातो मासु नै खानुपर्ने भए पकाउँदा विशेष ध्यान दिने र सम्भव भएसम्म घरेलु धाँसपात भएका जनावरको मात्र मासु खाने ।
रक्सी क्यान्सरको कारक भने भन्ने कुरा त धेरैलाई थाहा होला । रक्सीको कारण घाँटी, कलेजो, छातिजस्ता स्थानको क्यान्सरको जोखिम बढी हुन्छ । विकल्पः यदि रक्सी साँच्चै छाड्न चाहने हो भने त्यसको मात्रा बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ ।
कपाल झर्ने समस्या छ ? यी तत्व भएका खानेकुरा खाए रोकिन्छ !
काठमाडाैं महानगरका सबै विद्यालयका विद्यार्थीको एउटै पोशाक
दीपाले के भनिन् र नीताका आँखा रसाए